We Fight We Win. -- " More than Media ": ဦးဝင်တင် ( Democracy Founding Father) အဖြစ် ဂုဏ်ပြုကြ။
တိုင်းပြည် နှင့် လူထု အတွက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီး အောက်က လွတ်မြောက်အောင် ဘ၀တခုလုံးရင်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရလို့ ဘ၀ မှာ “ဖေဖေ” ဆိုတဲ့ ခေါ်ဆိုသံလေး ကို တောင် သူ ကြားခွင့် အချိန် မရ ရှာခဲ့ရဘူးဗျာ။
အဘ ပင်ပန်းလှပါပြီ၊ သူ အနားယူ ပါစေတော့။
သူ့ရဲ့ စွန့်လွှတ် ပေးဆပ်မှုတွေ ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ သူချစ်တဲ့ ပြည်သူ အားလုံးက မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပိသုကာ ဖခင်ကြီး တဦး (Founding Fathers) အဖြစ် ခေါ်ဆို အသိအမှတ်ပြု ကြရအောင်ဗျာ။
A very good initiative to call this. Ba Ba U Win Tin deserve this title also. He is alsoaBlue Star of the Democracy Sky.